Ogaden News Agency (ONA) – Ururka u Dooda Suxufiyiinta Caalamka oo Eedeeyay KGT Males Zenawi:
Ururka u Dooda Suxufiyiinta Caalamka oo Eedeeyay KGT Males Zenawi:
Posted by ONA Admin	/ October 12, 2011
Ururka u dooda Suxufiyiinta ee loo yaqaano CPJ (Commitee to Protect Journalists) oo Fadhigiisu yahay New York- ayaa waxa ay soo saareen mareeg ay ku canbaareynayaan Raisal Wasaraha Ethiopia Males Zenawi. Ra isalwasaraha Ethiopia ayaa ku sheegay suxufiyiinta u dhashay Sweden ee lagu qaffaashay Ogadeniya inay yihiin Argagaxiso.
Raisal wasaraha Ethiopia ayaa hadalkan yiri waqti lasugayo in lamaxkamadeeyo wariyaasha u dhashay Sweden oo muddo kusugna xabsiga Ethiopia. Waxayna taas muujinaysa in si caddaalad darro ah loo xukumo. Mudadii lasoo qafaashay illaa hadda wax xuquuq ah dowlada Ethiopia maysan siinin suxufiyintan u dhashay Sweden. Waxana lagu xukumay inay yihiin argagaxiso iyaga oosan helin ama uusan la joogin qareenkoodi u doodayay dhanka sharciga. Hadalka uu saxaafada siiyay raisal wasaraha Ethiopiana waxa ay sii xoojinaysa inaysan wax caddaalad ah helin oo la duudsiyo xaqooda. Waxa saas yiri Wakiilka u qaabilsan CPJ Afrika.
Ururkan CPJ aya mareegta ay soo saareen ku sheegay in KGT Zenawi wareysigii uu siiyay isniinti wargeyska aftenposten innu ku sheegay Presson iyo schibbye inay fal argagaxiso ku howlanayeen. Waxuuna sheegay in ay ahaayeen wiilal u addeegayay argagaxiso, maysan aheyn suxufiyiin. KT Zenawi ayaa yiri haddey suxufiyiin ahaayeen maxaa ay usoo raaceen urur argagaxiso oo ururkaas usoo galiyay dhulka Ogadeniya. Maxay uga qeyb qaateen daggaalka ururkan argagaxisada ah. Waxa aan heyna caddeyn iyaga oo hub watta. Haddii ficilkaas ahaa mid suxufinimo anigu ma aqaano waxa argagaxiso loogu yeedho. Sidaas waxa yiri kaligi taliye Zenawi oo kawaramaya Wariyaasha Sweden ee ku xidhan Ethiopia.
KGT Zenawi ayaa ku sheegay suxufiyiinta u dhashay sweden inay galleen danbi, Cidii rabta inay si sharci ah kusoogalaan Ethiopia waxa ay helikaraan inay si sharci ah kuso galaan loomana diidayo wadanka inay soo galaan hadey doonaan suxufiyiin ha ahaadeene.
CPJ waxa ay sheegeen in hadalka KGT Zenawi ee sheegaya in suxufiyintu xor u yihiin inay aadi karaan Ethiopia in waxba ka jirin waxayna mareegtoda kusoo saaren. illaa hada inay jiraan suxufiyiin tiro badan oo u dhashay wadanka Sweden oo dalbaday in lasiiyo oggolaansho ay ku aadan wadanka Ethiopia si ay goob joog uga noqdaan Maxkamada Presson iyo Shibbye lagusoo oogayo 18 October illaa hadana hal qof oo helay ma jiro oggolaansho uu ku aado Ethiopia.
CPJ waxa ay sheegeen in hadda wadanka Ethiopia ay ku jiraan xabsiga 8 suxufiyiin. Wadanka Ethiopia waxa uu noqonaya wadanka labaad ee ugu xidhayga badan suxufiyiinta islamarkaasna wadanka adduunka ugu horreeya ee caddaadis awgiis u masaafuriya wariyaasha u dhashay wadankisa. Waxa sidaas qoray CPJ.
Sidaas oo ay tahay waxa Zenawi uu sheegtay wargeyska aftenposten in Ethiopia ay usocoto jihadii saxda aheyd oo tubta toosan xuqquuqul insaaka ethiopia lasaaray. Waxuuna sheegay in Ethiopia tahay wadan qofka xuquuqdiisa asaasiga ah latixgaliyo.
CPJ waxa ay sheegeen inay codsanayaan in maxkamada lasaarayo labada suxufi in ay noqoto mid cadaalad ku dhisan iyada oo kiiskan uu yahay mid lasiyaasadeeyay waqtigan.